यौनसम्पर्क कति दिनमा कति पटक राख्ने ? - Nepalkakura
Home गृहपृष्ठ स्वास्थ्य यौनसम्पर्क कति दिनमा कति पटक राख्ने ?
यौनसम्पर्क कति दिनमा कति पटक राख्ने ?
यौन आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने त सबैलाई थाहा छ तर, यौनसम्पर्क कति दिनमा कति पटक राख्ने भन्ने कुरा धेरैलाई हेक्का नहुन सक्छ ।
आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर यौन सम्बन्ध स्थापित गर्नु एकदमै राम्रो मानिन्छ । हालै गरिएको एक अध्ययनले हप्तामा कति पटक यौन सम्बन्ध राख्दा राम्रो हुने भन्ने तथ्य बाहिर ल्याएको छ । यौन जोडीकाबीच इन्टिमेसीको अध्ययन गरियो र त्यसमा केही रोचक नतिजा देखियो ।
शिकागो विश्वविद्यालयद्वारा गरिएको अध्ययन द सोशल अर्गनाइजेशन अफ सेक्शुएलिटीः सेक्शुअल प्रैक्टिसेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स’ ले लगभग एक तिहाई जोडीहरु हप्तामा दुईदेखि तीन पटक सम्म सेक्स गर्छन्, जबकी केहि जोडीले भने महिनामा एक वा दुई अथवा तीन पटक मात्र सेक्स गर्ने गर्छन् । एजेन्सी
Previous articleनारायणकाजी श्रेष्ठलाई पदबाट हटाउन काठमाडौंमा प्रदर्शन
Next articleबोल्ड पोज दिइरहेको अभिनेत्री निया शर्मा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल